संबिधानले जनताको थाल थाल मा भात हाल्दिन्छ किन संविधानले सबै कुरा गर्छ भनि यि फटाहा नेताहरुले ठगीराछन् ???? ~ Khabardari.com
संबिधानले जनताको थाल थाल मा भात हाल्दिन्छ किन संविधानले सबै कुरा गर्छ भनि यि फटाहा नेताहरुले ठगीराछन् ????
4:42 AM Admin No comments
नेपाली जनताले यि नेताले जस्तो सुकै सपना बाँडेपनि ठग्नको लागी हो कुसर्ीको लागीहो भन्ने बुझेकाछन् । देशको बिकाशगर्न संविधाको मुख हेर्नु पर्दैन । यस्तै फटाहा नेता देशमा रहयो भने त्यो नयाँ बन्ने भनिएको संबिधानको के काम यिनले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्छन त्यो सत्य हो। के संबिधान देशको सबै कुराहो र के संबिधानले जनताको थाल थाल मा भात हाल्दिन्छ किन संविधानले सबै कुरा गर्छ भनि यि फटाहा नेताहरुले ठगीराछन् ????